အသွေးတော်အားဖြင့်လား၊ သို့မဟုတ် အသွေးတော်မပါဘဲလား။ | With or Without Blood | Real Conversion
ဇန်နာဝါရီလ ( ၂၁ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ ညနေပိုင်းတွင်
“အသွေးသွန်းခြင်းမရှိ၊ အပြစ်လွှတ်ခြင်းမရှိ။” ( ဟေဗြဲ ၉း ၂၂ )
Spurgeon ၏ပြောင်းလဲခြင်း၏အဓိကအချက်မှာ ရုတ်ချည်းမဟုတ်ပါ။ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်၊ သို့မဟုတ် လအနည်းငယ်ကြာ အပြစ်ကိုသိမြင်ခြင်းကြောင့်နာကျင်ခံစားရခြင်း ဖြင့်စတင်ပြီး ခရစ်တော်တစ်ပါးတည်းကို ကိုးစားပြီး ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်စိတ်ချမှုမတိုင်မှီတွင် ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ Spurgeon ၏ တရားဒေသနာအားဖြင့် ပြောင်းလဲလာသော လူငယ်အမျိုးသမီးနှစ်ဦး၏ သက်သေခံချက်နှစ်ခုရှိပါသည်။
သူမသည် မစ္စတာ Spurgeon ၏ တရားဒေသနာကို မကြား နာခင်အထိ စိတ်နှလုံးခိုင်မာလျက်ရှိသေးသည်။ သူမသည် ကျူး လွန်သောအပြစ်ဒဏ်ကို ခံရဖို့ အလွန်ပင် စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေပါ သည်။ သူသည် ဘုရားကျောင်းသို့ပုံမှန်လာသော်လည်း လပေါင်း များစွာ စိုးရိမ်စိတ်ပျက်လျက်ရှိပါသည်။ သူမက မစ္စတာ Spurgeon ၏ ခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်း တရားဒေ သနာကို ကြားသိခဲ့ရပါသည်။ သူမက ယေရှုခရစ်၊ ၎င်းသွန်း လောင်းသောအသွေးတော်ကို ယုံကြည်ကိုးစားသဖြင့် ဝမ်းမြောက် သည်။ သူသည် ယေရှုခရစ်ကိုသာ ယုံကြည်ကိုးစားသဖြင့် ကယ် တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်။ သူမသည် ယေရှုတစ်ပါးတည်း ကိုသာ ကိုးစားယုံကြည်ပါသည်။
သူမက သိချင်စိတ်ပျင်းပြသဖြင့် မစ္စတာ Spurgeon ၏ တ ရားဒေသနာကို ကြားလာခဲ့သည်။ သူသည် အသင်းတော်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြင့် ထားရစ်ခဲ့သည်။ သူမက “သူတရားဟော သည်ကို မည်သည့်အချိန်တွင်မျှ မလိုလားပါ။ သူ့ထံသို့ ဘယ် တော့မှ မသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်သည် ဝေးဝေး နေရလျှင် စိတ်ပျက်အားငယ်မိသည်။ သူတရားဟောသည်ကို ကြားလျှင်လည်း စိတ်ပျက်မိသည်။ ကျွန်ုပ်ဝေးဝေးနေလျှင်ပင် စိတ် ပျက်မိပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်သည် ယေရှုခရစ်ကို ယုံ ကြည်ကိုးစားပြီး ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်နှိမ့်သိမ့်ခြင်းကို ရရှိပါသည်။ ယေ ရှုမှတပါး အခြားအရာထဲ၌ ငြိမ်သက်ခြင်းရှာဖွေခြင်းကို အရှုံးမပေး မချင်း ခရစ်တော်ကို မတွေ့ရှိပါ။ အရာအားလုံးကို ရှေ့တန်းတင် ထားပါသည်။ သို့ရာတွင် ယေရှုခရစ်နှင့်၎င်း၏ကယ်တင်သောအ သွေးတော်မှတပါး ကျွန်ုပ်အား ငြိမ်သက်ခြင်းပေးနိုင်သောအရာကို ရှာမတွေ့ပါ။”
ကျွန်ုပ်သည် တရားဟောဖို့မလာမှီတွင် မစ္စတာ Griffith သည် လာ၍ ဓမ္မသီချင်းတစ်ပိုဒ်ကို သီဆိုမည်။ ၎င်းသည် လူငယ်များစွာက ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကိုးစားလာကြစေရန် အကူအ ညီပေးရန် Spurgeon ၏ အသင်းတော်တွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသော ဓမ္မသီချင်းဖြစ်ပါသည်။
“အသွေးသွန်းလောင်ခြင်းမရှိ၊ အပြစ်လွှတ်ခြင်းမရှိ။” ( ဟေဗြဲ ၉း ၂၂ )
Spurgeon ကြီးကို ရံဖန်ရံခါ “တရားဟောမင်းသား” ဟုပင် သမုတ်ကြပါသေးသည်။ ဧဝံဂေလိတရားဟောရာတွင် သူ့ထက် ကြီးမြတ်မည့်သူမရှိပါ။ သူ့အမှုတော်လုပ်ငန်း၌ သူ၏ အဓိက ဟောပြောသည့်အကြောင်းအရာသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် ခရစ်တော်၏ယဇ်ပူဇော် ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်သားတို့၏ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာကို ကယ်တင်ရှင်၏အသွေးတော်၊ အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းအတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်က သွန်း လောင်းသောအသွေးတော်အကြောင်း ဟောပြောခြင်းအားဖြင့် အသာရစေပါသည်။
“အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း” ဟူသောစကားလုံးကို ခေတ်သစ်လူများက သိပ်သိဟန်မရှိပါ။ “အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း“ သည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်အကြောင်း ဂရိစကားလုံးထဲတွင်တွေ့ရ သည်။ ၎င်းကို ၎င်းအဓိပါယ်ပိုမိုသိလာနိုင်စေရန် ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ ကွန်ကောတင်း က ဂရိစကားလုံးတွင် “aphesis” ဟူသောစကားလုံးဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ “လွတ်လပ်မှု”၊ “ခွင့်လွှတ်ခြင်း”၊ ရွေးနှုတ်ခြင်း”၊ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ”၊ နှင့် “အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း” ဟုဆိုလိုသည်။ ထိုစကားလုံးများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေပြု ကျမ်းကို ပို၍ရှင်းလင်းစေပါသည်။
“အသွေးသွေးလောင်းခြင်းမရှိဘဲ၊ လွတ်မြောက်ခြင်း၊ အပြစ်ခွင့်လွှင့် ခြင်း၊ ကယ်ချွတ်ခြင်း၊ လွတ်လပ်မှု၊ ပြစ်လွှတ်ခြင်းမရှိပါ။”
Spurgeon က အသွေးတော်နှင့်ပတ်သက်သော ကျမ်းပိုဒ်ကို မကြာခဏ ကိုးကားထားသည် မှာ အံ့ဩစရာမဟုတ်ပါ။ လူသိများသောတရားဒေသနာတစ်ခုတွင် သူက ဤသို့ဆိုထားသည်။
“ယေရှု၏အသွေးတော်အကြောင်းကို လုံး၀ဟောပြောခြင်းမရှိသော တရားဟောဆရာများစွာရှိသည်။ သူတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ် ပြောလိုသောအရာတစ်ခုသာရှိသည်။သူတို့ဆီသွားပြီး ဘယ်တော့ မှ နားမထောင်ပါနှင့်။ သူတို့စကားကို နားမထောင်ပါနှင့်။ အသွေး တော်မပါသောအမှုတော်လုပ်ငန်းသည် အသက်မဲ့သော လုပ်ငန်း၊ သေသောအမှုတော်လုပ်ငန်းသည် မည်သူ့အတွက်မျှ မကောင်း ပေ။”
အသွေးတော်၏အရေးကြီးမှုကို ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေပြုကျမ်းပိုဒ်က ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထား ပါသည်။
၁။ ပထမအချက်၊ ခရစ်တော်၏အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းမရှိဘဲ မည်သို့ဖြစ်လာ မည်ကို ဆင်ခြင်ပါ။
ခရစ်တော်၏အသွေးမသွန်းလောင်းဘဲ သင့်အပြစ်လွှတ်ခြင်းအခွင့်လုံးဝမရှိပေ။ ခရစ် တော်၏အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းမရှိဘဲ အပြစ်ထဲမှလွတ်မြောက်ခွင့်လည်းမရှိပေ။ ခရစ်တော် ၏ အပြစ်လွှတ်ခြင်းမရှိလျှင် သင့်အပြစ်ထဲက ကယ်နှုတ်ခြင်းလည်းမရှိပေ။ ခရစ်တော်၏အ သွေးသွန်းလောင်းခြင်းမရှိလျှင် အပြစ်ထဲက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်လည်းမရှိပေ။ ခရစ်တော်၏ အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းမရှိလျှင် ခွင့်လွှတ်ခြင်းလည်းမရှိပေ။ သေခြင်းတရား၌ သင့်အား စောင့်ဆိုင်းနေသည့် တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာ မီးငရဲပင်ဖြစ်ပါသည်။
စကော့တလန်တွင်ရှိသော Cambuslang နိုးထမှုကြီးတွင် ငရဲအကြောင်းကိုသာ ဟောပြောကြသည်။ “Cambuslang တွင် ဟောကြားသော တရားဟောဆရာက နာကျင်မှု များစွာဖြင့် ငရဲ၏အစစ်အမှန်ကို ယုံကြည်လက်ခံသည်။ သူတို့က ၎င်းတို့၏ငရဲအကြောင်းကြား နာသူများကို သတိမပေးလိုကြပေ။ သူတို့ကို များစွာက နားလည်စေသည်။ အသက်နှစ်ဆယ့် တစ်နှစ်အရွယ်က ကျွန်ုပ်နှင့်ငရဲဝေးလျက်ရှိသည်၊ ထိုနေရာသည် ပျောက်သောဝိညာဉ်များ လောင်ကျွမ်းရာနေရာ၊ နတ်ဆိုးများသည် သူတို့နှင့်အတူ သွားလာလှုပ်ရှားလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်ဟုထင်မိသည်။ ဆယ့်ငါးနှစ်အရွယ် ကောင်လေးက သူအားနည်းမသွားခင်တွင် ငရဲမီးသည် ငါ့ထံလာသည်ကို ငါမြင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ အမျိုးသမီးငယ်လေးကလည်း ငရမီးနံ့ ကြောင့် အသက်မရှုနိုင်ပါ၊ ငရဲမီးနှင့်အနက်ဆုံးသောတွင်းအနံ့ကြောင့် အသက်ရှူမ၀နိုင်ပါဟု ဆိုလေသတည်း။” (The Cambuslang Revival, The Banner of Truth, ၁၉၇၁၊ စာ-၁၅၄ )
သို့ရာတွင် ဤလူ့အတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်သက်ပြီး ငရဲအကျွန်ုပ်ယုံကြည်ချက်ကို အခြေ မခံပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ငရဲရှိကြောင်း လက်ခံသည်။ အကြောင်းမှာ သမ္မာကျမ်းစာထဲ၌ ဘုရားသ ခင်က မိန့်တော်မူသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများထက် ယေရှုက သမ္မာကျမ်းစာထဲ တွင် ငရဲအကြောင်းကို ပိုမိုပြောဆိုလိုပေမည်။ သူက သူ့အချိန်ကာလက မယုံကြည်သူများကို “ငရဲပြစ်ဒဏ်နှင့်အဘယ်သို့လွတ်နိုင်မည်နည်း” ဟု ကျိန်းမောင်းခဲ့သည်။ ( မဿဲ ၂၃း ၃၃ ) ယေရှုက မယုံကြည်သူများအား “ပိုးမသေမီးမငြိမ်းသည့် မီး၊ ငရဲအကြောင်း” ကို သတိပေးလေ့ ရှိပါသည်။ ( မာကု ၉း ၄၃ ) “ကျွန်ုပ်နာကျင်စွာခံစားရသည်” ( လုကာ ၁၆း ၂၄ ) ဟု ငရဲထဲတွင် ငို ကြွေးမြည်တမ်းသော ချမ်းသာသည့် သူငှေးတစ်ယောက်အကြောင်းကို ယေရှုက မိန့်ဆိုခဲ့ပါ သည်။ Spurgeon က ဤသို့ဆိုပါသည်။
ငရဲတွင် တစ်နာရီမျှ အချိန်သုံးခြင်းသည် အဘယ်မျှ ကြောက်မက် ဖွယ်ကောင်းပါသနည်း။ အိုး၊ သင်သည် ကယ်တင်ရှင်ကို ရှာဖွေရ သည်ကို အဘယ်မျှလောက် နှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ပါသနည်း။ သို့သော် ငရဲ၌ ထိုကဲ့သို့ တစ်နာရီမျှကာလမရှိပါ။ တစ်ကြီ ဆုံးရှုံးသည်နှင့် ထာဝရဆုံးရှုံးသွားရပေမည်။
Spurgeon က တဖန် ဤသို့ဆိုပါသည်။
သင်သည် ငရဲနှုတ်ခမ်းဝတွင် အပ်ချည်မျှတစ်ကြိုးဖြင့် ချိတ်ဆွဲထား ခြင်းကို ခံနေရပါသည်။ ထိုအပ်ချည်မျှင်မှာ အသက်ရှူခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ အသက်ရှုတစ်ချက်၊ သင့်စိတ်နှလုံး တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ ရပ် တန့်သွားလျှင် သင်သည် ထာဝရကမ္ဘာထဲသို့ ဘုရားမပါ၊ မျှော် လင့်ချက်မရှိ၊ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲ ရောက်လိမ့်မည်။ ထိုအ ရာကို ခဗျာၤး ရင်ဆိုင်နိုင်ပါသလား။
သင်သည် ငရဲသို့ ရောက်ရောက်ချင်းသိလာပေလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် အလွန်နောက်ကျလေပြီ။
သင့်အပြစ်များကို ယေရှုခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြောထားခြင်းမရှိလျှင် ထိုသို့ဖြစ်ပျက်လာပေမည်။
တရားစီရင်ခြင်းအမှုတွင် သင့်ကိုရင်ဆိုင်စေပြီး အပြစ်တင်မည့် သင့်အပြစ်ဒုစရိုက်ရှိပါ သည်။ သင့်အပြစ်သည် ဝှက်ထား၍ ရမည်ဟု သင်က ထင်မှတ်နေခဲ့သည်။ အောက်ပါအချက် ကို သင်မေ့လျော့နေပါသည်။
“ဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသောဝှက်ထားခြင်းမှစ၍၊ အလုံးစုံ သောအမှု၊ ကောင်းမကောင်းရှိသမျှတို့ကို စစ်ကြော၍၊ တရားသ ဖြင့် စီရင်တော်မူလတံ့သတည်း။” ( ဒေသနာ ၁၂း ၁၄ )
ပြုမိသော အပြစ်ဒုစရိုက်ကို အဘယ်သူမျှမမြင်နိုင်အောင် ဝှက်ထားနိုင်သည်ဟု ထင်မှတ်နေ သောသူအချို့ ယနေ့ညတွင် ဤနေရာ၌ ရှိနေနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါအကြောင်းကို သူတို့မေ့ လျော့နေပါသည်။
“ဘုရားသခင်၏မျက်စိတော်သည် ခပ်သိမ်းသောအရပ်တို့၌ရှိ၍၊ ကောင်းမကောင်းကို ကြည့်ရှုတော်မူ၏။….” ( ( သုတ္တံ ၁၅း ၃ )
လူများစွာတို့သည် အပြစ်၏အဆိပ်အတောက်ကို ခံစားခဲ့ကြရပါသည်။ သူတို့ကို ၎င်းတို့၏ ဝှက်ထားသောအပြစ်ကြောင့် ကိုယ်ကာလ ဖျားနာခြင်းကို ခံစားကြရပါသည်။ “ကျွန်ုပ်အပြစ် သည် ကျွန်ုပ်ရှေ့မှောက်သို့ရောက်ပါပြီ” ( ဆာလံ ၅၁း ၃ ) ဟု ခံစားရသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အခြား စိတ်နှလုံးဝေဒနာများစွာနှင့်အခြားနာမကျန်းခြင်းများတို့ကို ဝန်မခံသော၊ ခွင့်လွှတ်ထားခြင်းမရှိ သော ဒုက္ခထဲက ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်မိပါသည်။ သန့်ရှင်းသူအဖွဲ့ထဲက ပညာရှင်ကြီး John Owen က “ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောအစွမ်း သတ္တနှင့် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်လွှမ်းမိုးမှုတို့ကို ရရှိကြပါသည်” ဟုဆိုထားသည်။ သို့ရာ တွင် သင်သည် စစ်မှန်သောငြိမ်သက်ခြင်းကိုမူ ရှာဖွေတွေ့ရှိရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ပြစ်မှားသောစိတ်နှလုံးလည်းရှိပါသည်။ သင့်စိတ်နှလုံးထဲ၌ ပြစ်မှားသောအရာကို အဘယ်သူ မျှသိမည်မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် သင်သည် မှားယွင်းပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုပါ သည်။
“စိတ်နှလုံးသည် ခပ်သိမ်းသောအရာထက် စဉ်းလဲတတ်၏။ အလွန် ယိုယွင်းသောသဘောရှိ၏။ ….ငါထာဝရဘုရားသည် လူအသွေး အသီးတို့အား မိမိတို့အကျင့်အတိုင်း၊ မိမိတို့ခံထိုက်သော အကျိုး အပြစ်ကို ပေးခြင်းငှါ၊ နှလုံးကျောက်ကပ်တို့ကို စေ့စေ့စစ်ကြော တတ်၏။” ( ယေရမိ ၁၇း ၉၊ ၁၀ )
သင့်စိတ်နှလုံးထဲ၌ ပြစ်မှားသောအရာကို အဘယ်သူမျှမတွေ့နိုင်သော်လည်း ဘုရားသခင် သည် သင့်စိတ်နှလုံးကို စစ်ကြောတော်မူသည်။ ထို့အပြင် ဘုရားသခင်သည် ဝှက်ထားလျက်ရှိ သောအပြစ်တို့ကို စီရင်တော်မူသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်…..
သင့်အပြစ်ထဲမှ လွတ်မြောက်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ သင့်အပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းလည်း မရနိုင် ပါ။ သင့်အပြစ်မှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်လည်းမရှိပါ။ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းလည်း မရှိပါ။ လုံးဝမ လွတ်မြောက်နိုင်ပါ။ လုံး၀ လွတ်မြောက်ခြင်းလည်း မရှိပါ။ လုံး၀ မလွတ်မြောက်နိုင်ပါ။ ခွင့် လွှတ်ခြင်းလုံးဝမရှိနိုင်ပါ။ သင်သည် အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည့် နေရာတွင် ရှိနေပါ တကား။
သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် များများပါဝင်သောကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
၂။ ဒုတိယအချက်၊ သွန်းလောင်းသောယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်ရှိလျှင် မည်သို့ဖြစ်လာ မည်ကို ဆင်ခြင်ပါ။
ခရစ်တော်၏အသွေးတော်သည် ကျွန်ုပ်ကိုအခြေပြုကျမ်း၏အစဉ်လိုက်မှုကို ပြောင်း ပြန်လှန်သည်။ ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်အားဖြင့် သင့်အပြစ်ဒုစရိုက်တို့ကို ထာဝရကာလ ပယ်ဖျက်ထားပါသည်။ ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်အားဖြင့် သင့်အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်တော်မူခဲ့ပါ သည်။ ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်မှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရရှိသည်။ ခရစ်တော် ၏အသွေးတော်အားဖြင့် လွတ်လပ်ခြင်းရှိပါသည်။ ယေရှု၏အသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်ခွင့် လွှတ်ခြင်းရှိပါသည်။ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့် သင့်ကိုစောင့်နေသောအရာမှာ ကောင်းကင်ဘုံ၏ဘုန်းတော်ပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် ကောင်းကင်ဘုံ ၏ အရိပ်အယောင်ကို ပေးထားသည်။ ခရစ်ယာန်များသည် ယေရှုကို သီဆိုကျူးဧကြပါသည်။
“အသီးအသီး ဘာသာစကားကိုပြောသော လူအမျိုးအနွယ်ခပ်သိမ်း တို့အထဲမှ အကျွန်ုပ်တို့ကိုယူ၍၊ အသွေးတော်နှင့်ဘုရားသခင်အဖို့ ရွေးနှုတ်တော်မူ၏။ အကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင့်ရှေ့မှာ ရှင်ဘုရင်အ ရာ၌၎င်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌၎င်း၊ ခန့်ထား၍၊ မြေကြီးပေါ်မှာ စိုးစံရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။ ထို့ကြောင့်၊ ကိုယ်တော်သည် စာစောင်ကိုခံယူ၍ တံဆိပ်တို့ကို ဖွင့်ထိုက်တော်မူ၏ဟု အသစ် သောသီချင်းကိုသီ၍ လျှောက်ဆိုကြ၏။” ( ဗျာဒိတ် ၅း ၉ )
ယေရှု၏အသွေးတော်အားဖြင့် ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရသောသူများသည် ရွေးနှုတ်သောအသွေးတော် အကြောင်းကို ထာဝရကာလ ချီးမွမ်းနေမည်။ ထိုအကြောင်းကို Fanny Crosby က ၎င်း၏အံ့ ဘွယ်ဓမ္မသီချင်းတွင် ဤသို့ရေးသားထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် သူ့သားတော် ထာဝရကာလတိုင်အောင်။
သိုးသူငယ်အသွေးတော်ဖြင့် ရွေးနှုတ်ခံ၊ ရွေးနှုတ်ခံ၊ ရွေးနှုတ်ခံရပြီ၊
သူ့သား ကျွန်ုပ်ဖြစ်ခွင့်ရ၊ ရွေးနှုတ်ခံ၊ ရွေးနှုတ်ခြင်း ကျွန်ုပ်ခံရပြီ။
( “ရွေးနှုတ်ခံ” Fanny J. Crosby, ၁၈၂၀-၁၉၁၅ )
ထပ်ဆိုကို ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ သီဆိုလိုက်ပါ။
ကျွန်ု္ပ်တို့ကို ရွေးနှုတ်ကယ်တင်သောအသွေးတော်သည် သာမန်အသွေးမဟုတ်ပါ။ တမန်တော် ၂၀း ၂၈ တွင် ခရစ်တော်၏အသွေတော် အဘယ်မျှလောက်ကြီးမြတ်ကြောင်းကို သင်ယူရရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်က အင်အိုင်ဗွီဘာသာပြန်ဆိုချက်ကို သင်တို့အား ပေးထားပါသည်။
“ဘုရားသခင္သည် မိမိအသွေးတော္နှင့်ဝယ်တော်မူသောအသင်း တော်ကို လုပ်ကျွေးစေခြင်းငှါ၊” ( တမန် ၂၀း ၂၈ )
ကျွန်ုပ်တို့သည် “ဘုရားသခင်၏အသွေးတော်” အားဖြင့် ရွေးနှုတ်ခံရကြကြောင်းကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်းတွေ့ရပါသည်။ ခရစ်တော်သည် ဘုရား လူ့ဇာတိခံယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ “ဘုရားစစ် စစ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။” လူ့ဇာတိခံယူသော ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အသွေးတော်၊ “ဘုရားအသွေးတော်” ဟုခေါ်ဆိုခြင်းမှာ လုံးဝမှန်ကန်သောအရာဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Spurgeon က ဤသို့ဆိုပါသည်။
“ကါရနီကသွေးစွန်းသောယဇ်သည် အပြစ်သား၏ တစ်ခုတည်း သော မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။”
ခေတ်သစ်တရားဟောဆရာများတွင် “အသွေးတော်” သည် ယေရှုသေခြင်း၏အခြားစကား လုံးဖြစ်သည်ဟု ဆိုသောသူတို့ကို သတိပြုပါ။ သတိပြုပါ။ အသွေးတော်မပါသော ဧဝံဂေလိတ ရားသည် နတ်ဆိုးဧဝံဂေလိပင်ဖြစ်သည်။ တဖန် Spurgeon က ဤသို့ဆိုပါသည်။
“ကျွန်ုပ်တို့ ပြောမထွက်န်ိုင်သောအပြစ်ဒုစရိုက်ရှိပါသည်။ သို့သော် အသွေးတော်မဆေးကြောနိုင်သော အပြစ်မရှိပါ။
“ရွေးနှုတ်ခံရခြင်းအကြောင်း ကြွေးကြော်ရန် အဘယ်မျှ စိတ်ထက်သန်ပါနည်း။” သီဆိုကြပါစို့။
“အသွေးတော်ရှိတန်ခိုး” ကို သီဆိုကြပါစို့။
တန်ခိုးတော်၊ တန်ခိုးတော်၊ အံဩတန်ခိုးတော်၊
( “အသွေးတော်ရှိတန်ခိုး” Lewis E. Jones, ၁၈၆၅-၁၉၃၆ ).
San Francisco တောင်ပိုင်းသင်တန်းကျောင်းတွင်ရှိစဉ်ခါ Hippies နှင့်အတူ သမ္မာ ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းများစွာကို တက်ရောက်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၇၀ အစောပိုင်းကာလ က ယေရှု၏လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတွင်ဖြစ်ပါသည်။ အချို့သောလူငယ်များက LSD ကဲ့သု်႔ စိတ်ကို လှုံ့ဆော်သော မူးယစ်တစ်ခုလိုသာဖြစ်ပါသည်။ အချို့တို့သည် ထိုအပြစ်ကြောင့် နတ်ဆိုးစွဲသ လိုဖြစ်သွားကြပါသည်။ သူတို့သည် ကန်သာရင်းနတ်ဆိုးများကဲ့သို့ ရိုင်းစိုင်းကြပါသည်။ Hippie မိန်းကလေးတစ်ဦးထဲက နတ်ဆိုးကို မောင်းထုတ်ရန် ကြိုးစားနေသည့် ညီအစ်ကို အချို့ကိုလည်း သတိရမိပါသည်။ သူတို့က နတ်ဆိုးထွက်လာရန် အမိန့်ချမှတ်ကြသော်လည်း ဘာမျှ ဖြစ်မလာပါ။ ထို့နောက် ညီအစ်ကိုတစ်ဦးက စတင်သီချင်းဆိုပါသည်။
မိန်းကလေးသည် ၎င်းအဆုပ်ထိပ်ပိုင်းတွင် အလန့်တကြား နာကျင်စွာ အော်ဟစ်ပါသည်။ ၎င်းသီချင်းကို တဖန် သီဆိုပါသည်။
ထိုသွေးတော်၌ နစ်မြှုပ်သူသည်၊ အပြစ်နှင့်ကင်းစင်လေ။
သူမသည် တဖန် အလန့်တကြားအော်ပြီးနောက် နတ်ဆိုးများသည် သူမ၏နှုတ်မှထွက်လာကြ ကာ ယေရှုမြေကြီးပေါ်တွင်ရှိစဉ်ခါ လုပ်ဆောင်ခဲ့သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ခဏကြာတော့ ကလေးမ က လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါသည်။ သူမသည် ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ထိုင်ကာ ရေတစ်ခွက်သောက် လိုက်သည်။ သူမကို သိတာ ကြာနေပြီဖြစ်သည်။ သူမသည် ကောင်းပြီး ခိုင်မာသောခရစ် ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို တရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်ရှိ ကျွန်ုပ်၏သင်း အုပ်ဆရာ ဒေါက်တာ Lin ကို ပြောပြခဲ့ပါသည်။သူက “ဟုတ်ကဲ့ပါ Bob ရေ၊ တရုတ်ပြည်တွင်ရှိ သော နှစ်ခြင်းတရားဟောဆရာတစ်ဦးသည် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့် နတ်ဆိုးကို အဘယ်သို့နှင်ထုတ်ရမည်ကို မသိလျှင် သူတရားဟောသည်ကို မည်သူမျှ လာရောက်နားဆင် တော့မည်မဟုတ်ပါ” ဟုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်တန်ခိုး၏လုပ် ဆောင်ချက်ကို ပြဇာတ်ဆန်ဆန်ပြသည်ကို မြင်ခဲ့ဖူးကြောင်း သိပါသည်။ Spurgeon ကိုယ် တိုင်လည်း ကျေနပ်မည်ဟု ထင်မိသည်။ ယေရှု၏အသွေးတော်သည် LSD ၊ ဘိန်းဖြူ၊ သို့မ ဟုတ် လူငယ်များကိုဖျက်ဆီးရန် စာတန်အသုံးပြုထားသော အခြားမူးယဇ်ဆေးဝါးတစ်ခုခု ထက်တော့ ပို၍ တန်ခိုးကြီးပါသည်။ ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ဘဝအသက် တာတွင်ရှိသော အပြစ်များကို ဆေးကြောပေးနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် “လွတ်လပ်သော ကျေးဇူးတော်အသံလွင့်” မိတ္တူတစ်ခုကို ကြည့်နေ သည်။ ၎င်းသည် အတိတ်က နာမည်ကြီးတရားဟောဆရာများဖြစ်ကြသည့် John Gill, J. C. Ryle, Octavius Winslow, နှင့် Spurgeon တို့ကဲ့သို့သော တရားဒေသနာများစွာနှင့်ပြုပြင် စာစောင်ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်ကြည့်နေသောစာစောင်တွင် ရန်ငြိမ်းခြင်း၊ ရွေးနှုတ်ခြင်းတွင်ရှိသော ခရစ်တော်၏အသွေးတော်တန်ခိုးအပေါ်သက်ရောက်သောလူများအားဖြင့် ဟောကြားသော တရားဒေသနာများပါဝင်သည်။ ထိုကယ်ဗင်းတရားဟောဆရာများထဲက တစ်ဦးက ဤသို့ဆိုပါ သည်။
ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ထဲတွင် မရှိမဖြစလိုအပ်သော မြင့်မြတ် သည့်အစိတ်အပိုင်းရှိပါသည်။ ၎င်းသည် ထိတွေ့မရနိုင်သောအ ရပ်က စီးဆင်းလာသည်။ သန့်ရှင်းသောကယ်တင်ရှင်က မသန့် ရှင်းသော၊ အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်သောသူများအတွက် အပြစ်မဲ့သော ရန်ငြိမ်းခြင်းကို ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူ့အသွေးတော် ၏ ကြီးမားသောတန်ဖိုးပင်ဖြစ်ပါသည်။
ချစ်သူတို့ ဤအလင်းထဲသို့ကြည့်ပါ။ သင့်စိတ်နှလုံးသည် မြတ်သောကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့် ပြည့်စုံလိမ့်မည်။ အ ကြောင်းမှာ သင်သည် ခရစ်တော်ရှေ့တွင် ဒူးထောက်ရပ်နေသော ကြောင့်လည်းကောင်း၊ ထိုအသွေးတော်အားဖြင့် (သင့်စိတ်နှလုံး ဆေးကြောခြင်းခံရခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း) သင့်အပြစ်အလုံးစုံ ကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းက ဖုံးအုပ် ပယ်ဖျက်လိုက်ပါသည်။
ဤအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို လက်တွေ့အသုံးချကြပါစို့။ ဤအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို အ သုံးချကြပါစို့။ မပြောင်းလဲသေးသူများအတွက် အကျိုးရှိပေလိမ့်မည်။ မွတ်စလင်တို့တွင် အပြစ် ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟူ၍မရှိပါ။ ထိုအကြောင်းကို သူတို့ဘုရားက မပြောပါ။ အကြောင်းမှာ ဂိုရမ်ကျမ်း က မည်သို့အပြစ်ခွင့်လွှတ်ရမည်ကို တင်ပြမထားပါ။ လူတစ်ဦးသည် ကုသိုလ်ကောင်းမှုအား ဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းရရန် ကြိုးစားအားထုတ်နေပါသည်။ သူက “ကျွန်ုပ်အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခံရ မည်ထင်ပါသည်” ဟုသာ ပြောသည်။ ဘုရားမဲ့ဝါဒီများကိုကြည့်ပါ။ ၎င်းတို့၏အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံ ရသည်ကို လုံး၀ မသိကြပါ။
ဤနေရာ၌ ယနေ့ညတွင် ပျောက်ဆုံးသောယောက်ျား၊ သို့မဟုတ် မိန်းမ၊ သို့မဟုတ် လူငယ်တစ်ဦး ကျွန်ုပ်ရိတ်သိမ်းရမည်လော။ ပျောက်ဆုံးသောသူဖြစ်သည်။ သင်သည် ပျောက် ဆုံးသောသူဖြစ်သည်ဟု ခံစားပါသလား။ သင်သည် ထိုသို့ခံစားလျှင် ကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်ပါ သည်။ အကြောင်းမှာ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်အားဖြင့်ရှိပါသည်။ အိုအပြစ်သား၊ ကြည့်ရှုလော့။ သင်သည် ဂေသရှေမာန်ဥယျဉ်၌ သွေးစက်များကဲ့သို့ ချွေးစက် များကျရောက်သည်ကို မြင်ပါရဲ့လား။ ယေရှု လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ ချိတ်ဆွဲထားသည်ကို မြင်ပါ ရဲ့လား။ သင့်အတွက် သံရိုက်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ယနေ့ညတွင် သင့်အတွက် ကျွန်ုပ်သည် သံမှို ရိုက်ခြင်းခံရလျှင် သင်သည် အဘယ်သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။ သင်သည် ဒူးထောက်ပြီး ကျွန်ုပ်ခြေကို နမ်းရှုပ်မည်လော။ သင့်အတွက်ကိုယ်စားသေခြင်းကြောင့် ငိုကြွေးမည်လော။ သို့သော် အိုအပြစ်သား၊ ခရစ်တော်သည် သင့်အတွက်- သင့်အဖို့ အသေခံခဲ့ပါသည်။ သူသည် အသွေးသွန်းလောင်းသောကြောင့် သူ့ထံသို့လာ၍ ယုံကြည်ကိုးစားလျှင် သင်သည် ပျောက် ဆုံးနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိတော့ပါ။ ထို့နောက် သင်သည် အပြစ်သားဖြစ်သေးပါရဲ့လား။ သင် သည် အပြစ်ကိုမြင်ပါသလား။ အကြောင်းမှာ သင်သည် ယေရှုကို အပြည့်အဝ မယုံကြည်ဘူး လား။ ငါသည် သင့်အား တရားဟောရန် အပြည့်အဝ အခွင့်ရှိပါသည်။ ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုး စားပါ။ သင်သည် ပျောက်ဆုံးလာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ယေရှုကိုယ်တိုင္ကို ကိုးစားပါ။ သင့်အဖို့ အသေခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ၊ ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ကို ယုံကြည်ကိုးစားပါ။
သင်သည် အပြစ်သားမဟုတ်ဟု ဆိုပါသလား။ သင်သည် ခွင့်လွှတ်စရာလိုအပ်သည့် အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာမရှိဟု ပြောပါသလား။ ထို့နောက် သင့်အား ဟောပြောရန် အခြားယေရှုမရှိ တော့ပါ။ သူသည် လူကောင်းတို့ကို ကယ်တင်ရန် ဤလောကသို့လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ အပြစ်ရှိ သောသူတို့ကို ကယ်တင်ရန် ဤလောကသို့လာခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် အပြစ်သား ဖြစ်ပါရဲ့လား။ သင်သည် အပြစ်ရှိသည်ဟု ခံစားပါသလား။ သင်သည် အမှန်ကတယ် ပျောက် ဆုံးပါသလား။ ထိုအကြောင်းကို သင်သိပါသလား။ သင်သည် အပြစ်သားဖြစ်ပါသလား။ ထိုအ ကြောင်းကို သင်ဝန်ခံပါရဲ့လား။ အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံပါသလား။ ယနေ့ညတွင် ယေရှု ရှိနေမည်ဆိုလျှင် သူသည် အသွေးစွန်းသောလက်ကိုဆန့်တန်းပြီး “အပြစ်သားရေ၊ သင့်အဖို့ ကျွန်ုပ်အသေခံသည်၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်ကို ကိုးစားမည်လော” ဟု ဆိုလိမ့်မည်။ သူသည် ယနေ့ညတွင် ဤနေရာ၌ မရှိသော်လည်း ဤအကြောင်းကိုပြောရန် ကျွန်ုပ်ကို စေလွှတ်ခဲ့ပါ သည်။ ထိုအကြောင်းကို အမှန်တကယ် ယုံကြည်ပါရဲ့လား။ “အိုး”၊ သို့သော် သင်က “ငါသည် ဆိုးသောအပြစ်သားဖြစ်ပါသည်။” “အိုး” ယေရှုအား ၊ “သင်သည် အပြစ်သားဖြစ်သောကြောင့် သင့်အဖို့ အကျွန်ုပ်အသေခံရပါသည်” ဟုဆိုမည်။ “သို့သော်” သင်က “ကျွန်ုပ်သည် ထိုအ ကြောင်းကို စဉ်းစားတွေးခေါ်ရန် ရှက်ကြောက်လှပါသည်” ဟုဆိုပါသည်။ ယေရှုက “ ခွင့်လွှတ် ပြီးပြီ၊ လက်၊ ခြေဖဝါး၊ နံဘေးက ထွက်သော အသွေးများဖြင့် သင့်အပြစ်အလုံးစုံတို့ကို ဆေး ကြောပါသည်။ ငါ့ကိုသာ ယုံကြည်ပါ။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်၏တောင်းဆိုချက်အလုံးစုံပင်ဖြစ်ပါ သည်” ဟု မိန့်ဆိုသည်။ ယေရှုခရစ်ကိုယ်တော်တိုင္ကို ယုံကြည်ကိုးစားပါ။
သို့ရာတွင် လူတစ်ဦးက “ကယ်တင်ရှင်မလိုအပ်ပါဘူး” ဟု ဆိုသည်။ ထို့နောက် “အ မျက်တော်သည် ရောက်လာမည်၊ အမျက်တော်သည် ရောက်လာမည်” ဟူသော စကားမှတ ပါး ကျွန်ုပ်ပြောစရာ မရှိတော့ပါ။ တရားစီရင်ခြင်းသည် သင့်အတွက် ရောက်လာပါသည်။
သို့ရာတွင် သင်သည် အပြစ်သားဖြစ်သည်ဟု ခံစားပါသလား။ သင့်အပြစ်ကိုကော မုန်းတီးပါရဲ့လား။ သင်သည် ထိုအပြစ်ထဲက လှည့်ပြန်၍ ခရစ်တော်ထံသို့ လာလိုသော စိတ် ကော ရှိပါရဲ့လား။ ထို့နောက် ခရစ်တော်သည် သင့်ကိုယ်စားအသေခံသည်အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်ပြောပြနိုင်ပါသည်။ ယေရှုကို ယုံကြည်ပါ။ ကိုးစားပါ။ ယေရှုခရစ်ကိုယ်တော်တိုင်ကုိ ယုံ ကြည်ကိုးစားပါ။
Spurgeon သည် မြို့တစ်မြို့သို့ တရားဒေသနာဟောရန် ရောက်ရှိသောအခါ လူငယ် တစ်ဦးက စာရေးသားပေးပို့ခဲ့သည်။ သူက “ဆရာ၊ လာပြီးတရားဟောလျှင်၊ ကျွန်ုပ်ကိစ္စနှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိသော တရားကိုသာဟောပါ။ မိမိကိုယ်ကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဆိုးသွင်းဆုံးသောသူ တစ်ဦး သို့မဟုတ် ကယ်တင်ခြင်းလုံးဝမရနိုင်သောသူဟု မိမိကိုယ်ကို ထင်မှတ်နေရမည် အကြောင်းကို ကြားသိရသည်။ ကျွန်ုပ်က မိမိကိုယ်ကို အဆိုးသွင်းဆုံးဟု ထင်မှတ်ရန် ကြိုးစား သည်။ သို့ရာတွင် မလွယ်ကူပါ။ ကျွန်ုပ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိုသည်။ သို့ရာတွင် မည်သို့ ကယ်တင်ခြင်းရမည်ကိုမသိ” ဟု ရေးသားသည်။ Spurgeon က “ကျွန်ုပ်ထိုအရပ်သို့သွားပြီး တရားဟောသောအချိန်၌ သူ့ကိုသွားမည်ဆိုလျှင် မြေကြီးပေါ်တွင် သင့်ထက် ဆိုးသွင်းမိုက်မဲ သောသူ များစွာရှိနေသောကြောင့် ဘုရားသခင်က သင့်ကိုယ်သင် မြေကြီးပေါ်တွင် အမိုက်မဲ ဆုံးသောသူအဖြစ် ထင်မြင်ယူဆရန် ဘုရားသခင်က တောင်းဆိုမထားပါဟု သူ့ကို ပြောပြ မည်” ဟုဆိုသည်။ အခြားသူများလောက် အပြစ်ဒုစရိုက်မကျူးလွန်သောသူများစွာရှိပါသည်။
ဘုရားသခင်တောင်းဆိုထားသောအရာမှာ အခြားသူများထက် ကိုယ့်အကြောင်းကို ကိုယ်သိသည်။ သူတို့အကြောင်းကို များစွာမသိပါ။ သို့ရာတွင် မိမိကိုယ်ကိုအကြောင်း မြင်မိ သောအရာ၊ အထူးသဖြင့် စိတ်နှလုံးသားမှာ အခြားလူများသည် မိမိထက် ပိုမိုဆိုးသွင်းသူများ မဟုတ်ပါဟု ထင်မိခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့က ကျွန်ုပ်ထက် ပိုဆိုးသောအရာကို လုပ်ကောင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ကြသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်သည် တရားဒေသနာများစွာ၊ သတိပေးချက်များ စွာကို ကြားရသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် သူတို့ထက် အပြစ်ကျူးလွန်သူများပင်ဖြစ်လေ တော့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ထံသို့ လာလိုသဖြင့် “သခင်၊ ကျွန်ုပ်ပြစ်မှားပါပြီ ဟုဆိုသည်။ သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ လာ၍ “သခင်ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်လို အပြစ်သားကို သနားပါ” ဟု ပြောဆိုရန်သာဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆိုရန်သာ လိုအပ်သည်။ သင်သည် မိမိကိုယ်ကို ပျောက်ဆုံးနေသည်ဟု ခံစားမိပါသလား။ နောက်တဖန် ယေရှုထံသို့လာပါဟု ကျွန်ုပ်ဆိုပါ သည်။ သူ၏ မြတ်သွေးတော်ဖြင့် သင့် ကို ဆေးကြောတော်မူမည်။”
“အသွေးသွန်းလောင်ခြင်းမရှိ၊ အပြစ်လွှတ်ခြင်းမရှိ။” ( ဟေဗြဲ ၉း ၂၂)
ဤတရားဒေသနာ၏အဆုံးပိုင်းတွင် ဤနေရာတွင် ပျောက်ဆုံးသော အပြစ်သားမရှိ ပါ။ သူကိုယ်သူ ပျောက်သည်ဟု သိသောသူမရှိပါ။ အပြစ်ခွင့်မလွှတ်နိုင်သည့် အပြစ်သားမရှိ ပါ။ “ဘုရားသခင်၏မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ဘုန်းအသရေတော်၌ ဝမ်းမြောက်ပါ။” သင်သည် အပြစ် ထဲ၌ လဲပြန်ကျရောက်သော်လည်း ဤညချိန်တွင် ကောင်းကင်ကဲ့သို့ ထွန်းလင်းလိမ့်မည်။ အ ပြစ်သားတစ်ဦးသည် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်လက်ခံသည်နှင့်ချက်ခြင်း၊ ခရစ်တော်၏အသွေး တော်၌ ဆေးကြောသန့်စင်ပြီးသွားပြီ။ ဤစာပိုဒ်သည် သင့်အသက်တာနှင့်စိတ်နှလုံးထဲတွင် အမှန်တည်ရှိပါစေသော်။
တစ်ခုတစ်လေမျှ တောင်းဆိုခြင်းမရှိ၊ ရှိသည်အတိုင်းပင်၊
ကိုယ်တော့်အသွေးသည် ကျွန်ုပ်အတွက် သွန်းလောင်း။
ကိုယ်တော့်ထံသို့ လာရန် တောင်းဆိုထားသည်၊
ဘုရားသိုးသူငယ်၊ ကျွန်ုပ်လာသည်၊ ကျွန်ုပ်လာသည်။
( “ကျွန်ုပ်ဖြစ်သည်အတိုင်း”၊ Charlotte Elliott, ၁၇၈၉-၁၈၇၁ )
ပထမနှစ်တန်းသို့ လာပါ။ သင်ကျူးလွန်သောအပြစ်ကို ဘုရားသခင်ထံ ဝန်ချတောင်းပန်ပါ။ ထို့ နောက် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ကိုးစားပါ။ သူ့ထံသို့လာပါ။ ခရစ်တော်၏မြတ်သောအသွေး တော်ဖြင့် သင့်အပြစ်ကို ဆေးကြောပါ။
သွေးတော်နှင့်ပြည့်သောစမ်း” (William Cowper ၊၁၇၃၁-၁၈၀၀; “အံ့ဘွယ်ကျေးဇူးတော်” သံစဉ် ).
“အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းမရှိ၊ အပြစ်လွှတ်ခြင်းမရှိ။” ( ဟေဗြဲ ၉း ၂၂)
၁။ ပထမအချက်၊ ခရစ်တော်၏အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းမရှိဘဲ မည်သို့ဖြစ် လာမည်ကို ဆင်ခြင်ပါ။ မဿဲ ၂၃း ၃၃၊ မာကု ၉း ၄၃၊ လုကာ ၁၆း ၂၄၊ ဒေသနာ ၁၂း ၁၄၊ သုတ္တံ ၁၅း ၃၊ ဆာလံ ၅၁း ၃၊ ယေရမိ ၁၇း ၉၊ ၁၀။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ သွန်းလောင်းသောယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်ရှိလျှင် မည်သို့ဖြစ်လာမည်ကို ဆင်ခြင်ပါ။ ဗျာ ၅း ၉၊ တမန် ၂၀း ၂၈။